Tara andro vitsivitsy fotsiny, nefa tara loatra
"Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina."1 Jaona 2:1
"Indro, ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena."2 Korintiana 6:2
Tokony hotsaraina ity vehivavy iray nanao fandikan-dalàna tena lehibe. Natoro azy ny mpisolovava kinga iray fanta-daza, izay mety hahafaka azy madiodio. Imbetsaka no nanemorany ny fihaonana tamin’io mpisolovava io. Farany, indray andro, dia tapa-kevitra izy hanatona azy. Izao anefa no valinteny azony: «Tena malahelo aho, Madama, fa tsy afaka hiaro anao. Andro vitsivitsy izao, dia notendrena ho mpitsara aho. Mbola manana fotoana fohy ihany aho, ahazoako manao raharaham-piarovana, saingy tsy mahazo mandray raharaha vaovao intsony. Raha andro vitsivitsy talohan’izao, dia mbola ho azoko narovana ianao!»
Tsy fantatra moa raha nisy fiantraikany tamin’ny didim-pitsarana izany fanaovana an-tsirambina izany. Saingy misy kosa tranga iray hahatonga ny tsirambina ataontsika hiteraka vokatra faran’izay mavesatra: rehefa hiseho eo anatrehan’Andriamanitra isika. Ambaran’ny Baiboly mazava tsara io tranga miezinezina io: “Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana...” (Hebreo 9:27).
Mandraka ankehitriny, Jesosy Mpamonjy dia tsy hoe hiaro anao eo anatrehan’Andriamanitra tsy akory, fa afaka hahazo famotsoran-keloka ara-drariny ho anao, satria efa nisolo anao, nizaka ny famaizana sahaza anao. Maty noho ny fahotantsika Izy. Hanao ampitso lava ve? Ho tara loatra izany. Raha tsy maika handray an’i Jesosy ho Mpamonjy, dia tandindomin-doza hihaona amin’i Jesosy Mpitsara (Romana 2:16). Indray andro any, ny olona tsirairay dia hantsoina hifanatrika amin’Ilay Mpahary azy. Mbola manana safidy ianao anio: hihaona amina Mpitsara hanameloka anao mandrakizay ve ianao, sa amin’Ilay Ray handray anao eo anilany?